ရှည်လျားသောနှာခေါင်းသံနှုတ်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်း - တရုတ်စက်ရုံ - Cixi Wenap အင်တာနေရှင်နယ်ထရေးဒင်း Co. , Ltd မှ
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > hardware Tools များ > ကျင်းပခြင်း Tools များ > ရှည်လျားသောနှာခေါင်းသံနှုတ်
အဆိုပါ Long ကနှာခေါင်းသံနှုတ်၏ကုန်ပစ္စည်းမိတ်ဆက်
long-နှာခေါင်းသံနှုတ် (စ pointy-နှာခေါင်းသံနှုတ်အဖြစ်လူသိများ, အပ်-နှာခေါင်းသံနှုတ်, pinch-နှာခေါင်းသံနှုတ်သို့မဟုတ် snipe-နှာခေါင်းသံနှုတ်) ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့်ကွေးဖို့သိမ်းသွားလေ၏, ရတနာဒီဇိုင်နာများ, လြှပျစစျ, ကွန်ယက်အင်ဂျင်နီယာများနှင့်အခြား tradesmen အသုံးပြုသောကိုင်ပြီးသံနှုတ်နှစ်ခုလုံးရှိပါတယ် , re-အနေအထားနှင့်ဝါယာကြိုးကိုက်။ အဆိုပါသံနှုတ် '' ပူးတွဲအနီးရှိဖြတ်တောက်ခြင်းအစွန်းထောက်ပံ့ & quote နေချိန်မှာသူတို့ရဲ့ namesake ရှည်လျားသောနှာခေါင်းအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ထိန်းချုပ်မှုပေးသည်; တ tool ကို & quote; အဆင်ပြေ။ သောကြောင့်သူတို့ရဲ့ရှည်လျားပုံသဏ္ဍာန်တို့သည်ကေဘယ်လ်ကြိုးများသို့မဟုတ်အခြားပစ္စည်းများလက်ချောင်းများသို့မဟုတ်အခြားနည်းလမ်းတွေနဲ့ဖမ်းသို့မဟုတ်လက်လှမ်းမမှီပါဖြစ်လာကြပါပြီရှိရာအသေးစားဒေသများသို့ရောက်ရှိဘို့အသုံးဝင်ပါသည်။
အဆိုပါ Long ကနှာခေါင်းသံနှုတ်၏ကုန်ပစ္စည်း Parameter
ကို ANSI standard အရသိရသည်ထုတ်လုပ်ရန်
Chrome ကဗန်နာဒီယမ်သံမဏိ, ကာဗွန်သံမဏိ
Chrome ကို Polishing, ချထားတဲ့
ကွဲပြားခြားနားသောအရွယ်အစား, အရောင်, ပုံသဏ္ဍာန်ရရှိနိုင်ပါသည်။
Pro ကိုအဆိုပါ Long ကနှာခေါင်းသံနှုတ်၏ပြွန် Feature ကိုများနှင့်လျှောက်လွှာ
Pro ကိုduct Features
Long Nose Pliers with Wire Cutter are durably constructed from chrome vanadium steel with Pro ကိုTouch grips for extra comfort and reduced hand fatigue. Hardened and tempered chrome vanadium steel for strength and durability.Fine polished, cutting edges induction hardened. Extra strength comfortable ergonomic two-component handles which combines durability andasecure non-slip grip.
Pro ကိုduct usage:အီလက်ထရွန်းနစ် insdustry, ရတနာအပြောင်းအလဲနဲ့, မော်ဒယ် Insight web studio ၏၏ပြုပြင်အလုပ်အတွက်သက်ဆိုင်။
Pro ကိုduct Details of the Long Nose Plier
hot Tags:: ရှည်လျားသောနှာခေါင်းသံနှုတ်, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း, တရုတ်ခုနှစ်တွင်ဖန်ဆင်းစက်ရုံ, လက်ကား, ဝယ်, ဖောက်သည်စတော့အိတ်များတွင်အစုလိုက်, စျေး, Pricelist, စျေးနှုန်း, High Quality
ဝါယာကြိုး strips တွေအတွက် Chrome ဗန်နာဒီယမ်မိုးသည်းထန်စွာတာဝန်ရှည်လျားသောနှာခေါင်းသံနှုတ်